Filannoo Ameerikaa: Dureessichi Maayikil Biluumbarg jedhamu pirezedaantummaatiif dorgomuuf - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Maayikil Biluumbarg
Dureessiifi hojii daldalaatiin kan beekamu Maayikil Biluumbarg paartii warra Dimokiraatawaa bakka bu'uudhaan kaadhimamaa pirezedaantii Ameerikaa ta'uun dhiyaachuuf fedhii guddaa akka qaban himameera.
Maayikil Biluumbarg kanaan dura kantiibaa magaalaa Niiwu Yoork akka turan kan himan dubbi himaan isaanii, kaadhimamtoonni paartii warra Dimokiraatotaa bakka bu'uudhaan Pirezedaant Doonaald Tiraamp waliin yeroo ammaa dorgomaa jiran mo'atanii darbuudhaaf ga'umsa isaan qaban irratti Maayikil Biluumbarg shakkii akka qaban ibsaniiru.
Maayikil Biluumbarg yeroo ammaa ga'eessa ganna 77 yoo ta'u, dorgommii kaadhimamtootaa kutaa bulchiinsaa Albamaa keessatti Dimokiraatotaaf dhiyaatan waliin dhiyaatee dorgomuudhaaf torban kana keessa dhiyeeffatu jedhamee eegama.
Tiraamp maallaqa gargaarsaa qisaaseesseef $2m akka kaffalu ajajame
Taateen 'Bill Clinton' dubartii biraatti shakkamee ture TVn daawwatamuuf
Dorgommii pirezedaantummaa bara dhufu Pirezedaant Doonaald Tiraamp waliin taasifamuuf hanga ammatti kaadhimamtoonni 17 dhiyaataniiru.
Pirezedaantiin Itti-aanaa duraanii bara bulchinsa Baaraak Obaamaa Joo Baayideen, miseensa mana maree kutaa bulchiinsa Maasaachuseet Elzaabeet Waareen, akkasumas miseensa mana maree kutaa bulchiinsaa Veermoont Barnii Saandeers dorgommii pirezedaantummaa kana keessatti warra adda durummaan eermanidha.
Bu'uura safartuu yaada ummataa dhiyeenya kana walitti qabameen bu'aa argameen Erzaabeet Waareniifi Barnii Saanders kaadhimummaa pirezedaantummaa paartii Dimokiraatotaa ta'uun mo'atanii darbanii Pirezedaant Doonaald Tiraamp waliin yoo dorgoman, Tiraamp marsaa lamaffaatiif mo'atee carraa Waayiit Hauus keessa turuu argachuuf carraa bal'aa argata jedhameera.
Dubbi Himaan Maayikil Biluumbarg dabalaan akka ibsanitti, "Karaa Tiraamp ittiin mo'amuu qaburratti hojii keenya fixachuu qabna. Haata'u malee, ga'umsi kaadhimamtoota warra paartii Dimokiraatotaa isa waliin dhiyaachuun dorgomuuf jiranii hedduu nama kan yaadchisudha," jedhan.
Pirezedaant Doonaald Tiraamp ammoo hanga ammaatti dhimma kana irratti yaada isaa hin kennine.
Maayikil Biluumbarg dureessa beekamaa yoo ta'u qabeenyi isaa akka barruu Foorbiis kaa'etti walumaa galatti Dolaara Biliyoona 52 ta'a.
Kana jechuun ammoo qabeenya Doonaald Tiraamp kan Dolaara Biliyoona 3.1 ta'ee harka 17 caala jechuudha.
Maayikil Biluumbarg gaazexaa maqaa isaatiin maxxanfamu dhimma biizinasiirratti hojjetu beekamaa qaba.
Hojii tola ooltummaa keessattis hirmaachuun kan beekamu Maayikil Biluumbarg, Dolaara miliyoonota hedduu barnoota, fayyaafi gargaarsa birootiif kennuun beekama.
Jalqaba miseensa paartii Dimokiraatotaa turee boodarra garuu dorgommii kantiibaa Niiwuu Yoork irratti milkaa'uuf jecha bara 2001 Rippabilikaanii ta'ee ture.
Hanga bara 2012tti erga marsaa sadiitiif kantiibaa magaalaa Niiwuu Yoork ta'uun tajaajilanii booda, bara darbe ture kan gara paartii Dimokiraatotaatti deebiye.
Diraamaan kachachala 'Bill Clinton fi Monica Lewinsky' TV Ameerikaarratti daawwatamuuf
Katie Hill: Dubartiin miseensa kongirasii US himannaa irratti dhiyaateen aangoo gadhiifte